गृहपृष्ठ » धर्म/संस्कृती » आज शनिबार पूर्ण सूर्यग्रहण, जान्नुहोस् नेपाल, भारतमा कति समय लाग्नेछ र कस्तो असर पर्छ ?
एजेन्सी । अंग्रेजी वर्षको अन्तिम सूर्यग्रहण आज शनिबार, मंसिर १८ गते । डिसेम्बर ४ २०२१ शनिबार लाग्दैछ ।
डिसेम्बर ४ मा लागेको यो ग्रहण १५ दिनभित्र लाग्ने दोस्रो ग्रहण हो । यसअघि नोभेम्बर १९ मा चन्द्रग्रहण भएको थियो ।
यो ग्रहण खग्रास अर्थात पूर्ण सूर्यग्रहण हुनेछ । आउनुहोस् यो सूर्यग्रहण नेपाल भारतमा कुन समयमा लाग्नेछ र नेपाल, भारतमा यसको प्रभाव कस्तो हुनेछ। यो वर्षको सूर्यग्रहण विश्वका कुन–कुन भागमा राम्रोसँग देखिने र कहाँ कहाँ हेर्न सकिन्छ यो खगोलीय घटना प्रत्यक्ष, जान्नुहोस् हरेक प्रश्नको उत्तर ।
सूर्यग्रहण कहिले र कहाँ देखिनेछ ?
भारतीय समय अनुसार यो पूर्ण सूर्यग्रहण बिहान १० बजेर ५९ मिनेटमा सुरु भई दिउँसो ३ः०७ मा समाप्त हुनेछ ।
नेपालमा १० बजेर ४४ मिनेटमा सुरु हुनेछ । सूर्यग्रहणको अवधि करिब ४ घण्टा ८ मिनेटको हुनेछ । यो ग्रहण अन्टार्कटिका बाहेक दक्षिण अमेरिका, अष्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रिका र दक्षिण एट्लान्टिकका देशबाट देखिनेछ ।
यो सूर्यग्रहण नेपाल र भारतमा देखिने छैन । बिहानै भएकाले यो ग्रहण भारतमा देखिने छैन । भारतमा दृष्टिविहीन भएकाले ग्रहण अवधिमा कुनै पनि काममा रोक लगाइने छैन ।
सुतक काल मानिने हो कि ?
डिसेम्बर ४ मा हुने सूर्यग्रहण नेपाल र भारतमा देखिने छैन । भारतमा नदेखेकाले यसपटक सुतकको नियम मानिने छैन । साथै ग्रहण अवधिमा माङ्गलिक कार्यमा रोक लगाइने छैन । सुतक अवधि नमान्ने भएकाले मन्दिरका ढोकाहरू बन्द हुने छैनन्, पूजाआजा गर्न निषेध गरिने छ ।
यस सूर्यग्रहणका मुख्य आकर्षणहरू
यो ग्रहण वृश्चिक र ज्येष्ठ नक्षत्रमा लाग्नेछ । यस ग्रहणको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा केतुसँग सूर्यको संयोग हुने भएको छ । साथै, यस ग्रहणमा चन्द्रमा र बुधको संयोजन हुनेछ। सूर्य र केतुको प्रभावले दुर्घटनाको सम्भावना रहन्छ ।
यसका साथै यस दिन सूर्यग्रहणसँगै शनि अमावस्याको अद्भुत संयोग पनि बनिरहेको छ । शनिदेवलाई सूर्यका पुत्र भनिन्छ । यस्तो अवस्थामा यस ग्रहणको प्रभावले शनि र सूर्य दुवैको आशीर्वाद प्राप्त गर्न सकिन्छ।
के हो सूर्यग्रहण ?
सूर्य, चन्द्रमा र पृथ्वी एक सीधा रेखामा आएपछि सूर्यग्रहण लाग्छ। यो खगोलीय घटना सूर्य र पृथ्वीको बीचमा चन्द्रमा आउने कारणले हुन्छ। यस समयमा, चन्द्रमाले सूर्यको किरणहरू रोक्छ र पृथ्वीको भागहरूमा आफ्नो छायाँ राख्छ। तर, चन्द्रमाको छायाले सम्पूर्ण पृथ्वीलाई ढाक्न पर्याप्त छैन। त्यसैले ग्रहणको समयमा कुनै विशेष क्षेत्रमा कालो छाता हुन्छ ।
पूर्ण सूर्यग्रहण के हो ?
जब चन्द्रमाले सूर्यलाई पूरै ढाक्छ र सूर्यका किरणहरू पृथ्वीमा पुग्दैनन्, यो घटनालाई पूर्ण सूर्यग्रहण भनिन्छ। जब चन्द्रमाले सूर्यलाई आंशिक रूपमा ढाक्छ, यो घटनालाई आंशिक सूर्यग्रहण भनिन्छ। एकै समयमा, जब चन्द्रमाले सूर्यको मध्य भागलाई ढाकेको छ र सूर्य रिंग जस्तो देखिन्छ, तब यो खगोलीय घटनालाई वलय सूर्यग्रहण भनिन्छ।
जहाँ सूर्यग्रहण हेर्न सकिन्छ
टेलिस्कोपको सहायताले हेर्ने हो भने यो सूर्यग्रहण निकै सुन्दर देखिन्छ । तपाइँ यसलाई भर्चुअल टेलिस्कोपको मद्दतले www.virtualtelescope.eu मा हेर्न सक्नुहुन्छ। यस बाहेक, तपाइँ यसलाई यूट्यूब च्यानल CosmoSapiens, Slooh मा पनि लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ।
सूर्यग्रहण सकिएपछि अपनाउनुहोस् यी उपाय
ग्रहणको अशुभ प्रभावबाट बच्न महामृत्युञ्जय मन्त्रको जप गर्नुहोस्। ग्रहण सकिएपछि गंगाजल छर्काएर घरको शुद्धीकरण गर्नुहोस् । यदि सूर्यग्रहणको भोलिपल्ट धनु संक्रान्ति परेको छ भने सूर्यसँग सम्बन्धित कुनै पनि वस्तु दान गर्नुपर्छ । अर्को दिन तामा, गहुँ, गुड़, रातो कपडा र कुनै पनि तामाको वस्तु दान गर्न सक्नुहुन्छ।